(Manifesto de Prago)
FIFANDRAISAM-PIRENENA EO AMIN'NY FANABEAZANA
Ny fiteny kely angaha atao hoe madinika dia mifamatotra ary voafaritra eo amin'ny kolontsaina amin'ny firenena tsirairay avy. Ohatra, ny mpianatra izay mianatra ny teny anglisy, na mianatra momba my kolontsaina, jeografia sy ny politika ho an'ireo tany miteny anglisy, indrindra ny Amerika sy Angletera, araka izany dia voafetra hatreo ihany. Ireo mianatra ny Esperanto kosa dia mianatra eo amin'ny tontolo tsy voafetra ary izay firenena na iza misy azy dia olona ao an-tranony ihany izy ireo. Isika manamafy fa ny fandalimana na amin'ny teny inona na amin'ny teny inona dia voafatotra sy voafetra ihany eo amin'ny tontolo iainana. Isika dia fikambanana ho amin'ny fifandraisam-pirenena eo amin'ny fanabeazana.
FIASANA MAHOMBY ARA-PEDAGOJIA
NY ZON'NY TENY
Ny fitondrampanjakana eran-tany dia manamarika ny fisian'ny fahasamihafa ny teny eto amin'izao tontolo izao ary sakana lehibe ho amin'ny fifandraisana izany sy fivoarana ihany koa. Ho an'ny fikambanana Esperanto kosa my fahasamihafana dia tsy vato misakana velively eo amin'ny loharano azo tovozina. Araka izany ny teny tsirairay dia karazana zava-mahavelona lafo vidy tokoa ary mendrika harovana mandramaty. Isika dia fikambanana ho amin'ny fandalàna ny fahafamihafam-pitenenana.
Laŭ la paĝoj, kaj kun kelkaj grafikaĵoj, originale ellaboritaj por la Manifesto de Prago fare de Franko Luin / 3 sep 1996 - 10 apr 2000